Posted by blackroze at Sunday, December 23, 2012 20 comments
(ရေးတာနည်းနည်းများရှည်သွားလားမသိဘူး..အောက်မှာ tag ထားတဲ့နာမည်အထိတော့ဖတ်စေချင်ပါတယ်.. :P )
မကြာခင် ရက်ပိုင်းအတောအတွင်းမှာ 2012 ဆိုတာကို လက်ပြနှုတ်ဆက်ပြီး 2013 ကိုကြိုဆိုရတော့မှာပါ
ကျမတို့လူသားတွေအတွက် 2012 ဆိုတာက ဘယ်တော့မှ ပြန်လှည့်လာတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး..
ဒီတော့ ဒီတနှစ်အတွင်း မှာ ကျမတို့တွေ ဘာတွေ လုပ်ခဲ့ကြလည်း
ကျမဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ 2012 ကတော့ တကယ်ကိုရသပေါင်းစုံနဲ့ပါဘဲ...ပျော်ရတာတွေလည်း
ရှိသလို ငိုရတာတွေလည်းများခဲ့ပါရဲ့..အပျော်ဖြစ်ဖြစ် အငိုဖြစ်ဖြစ် ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံး
ကတော့ 2012ထဲမှာဘဲ ကျမထားခဲ့လိုက်ပါပြီ...
ကျမဒီနှစ်ထဲမှာ လိုချင်မိတဲ့ပစ္စည်းတွေ တော်တော်များတယ်...
ဒါပေမဲ့ ကျမတခုမှ မဝယ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး...
ဘယ်လောက်ထိတောင်လဲဆိုရင် ကျမသူငယ်ချင်း 21 ရက်နေ့မှာ မင်္ဂလာဆောင်မှာ..သူ့မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီး ဝတ်စုံတစုံဝယ်ဖို့ စိတ်ကူးထားတာ
ကြာလှပြီ..တကယ်တမ်းကျမ မဝယ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး.. အဲလိုဘဲ ဝယ်မယ်ဆိုပြီး ရည်ရွယ်ထားသမျှ
ကျမဒီနှစ်ထဲမှာ လိုက်ပို့ပေးမယ်လို့ အမေကို ကတိပေးခဲ့တဲ့ ခရီးစဉ်တခုရှိပါတယ်...
ဒီနှစ်ထဲမှာ ကျမအတွက် စိတ်ညစ်စရာတော်တော်များတယ်..
မိသားစု အလုပ် အချစ်ရေး လူမှု့ရေး ...အစစအရာရာပေါ့ ...
မိသားစုဆိုလည်း တော်တော် စိတ်ညစ်စရာ နားပူစရာတွေ နဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ အချိန်တစ်ခုပါဘဲ...
အချစ်ရေးဆိုလည်း... အင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးး စိတ်မောစရာတွေ နဲ့ပြည့်နေတဲ့ကာလတစ်ခုပေါ့
အိမ်ထောင်ရေး အတွက်ရည်မှန်းချက်ကတော့ အပေါ်ကတစ်ခုအဆင်ပြေရင်တော့ ဒီတစ်ခုလည်း အလိုလို အိုကေသွားမှာပါ (~ ^)
လူမှု့ရေး ဆိုလည်း ...ဘယ်လိုပြောရမလည်းရှင်..နှစ်ကုန်ခါနီးလာလေ လူတွေအကြောင်း
အလုပ်ထဲမှာ ကျမနဲ့တော်တော်လေး ခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်..ကျမအလှုအတွက်ပိုက်ဆံ
ကောက်တိုင်း သူအမြဲတမ်းထည့်နေကြပါ... တော်တော်လေးလည်းရင်းနှီးတယ်.. ဖြစ်ချင်တော့ သူကနှစ်ကူး မှာ မြန်မာပြည် ပြန်မယ်...ကျမလည်း ပြန်ဖို့ အစီအစဉ်တစ်ခုရှိနေတယ်.. အဲမှာစတွေ့တာဘဲ.. အဆင်ပြေနေတဲ့ အနေအထားတစ်ခုကနေ ကျမ သူ့ကိုတော်တော် မကြည်မလင်ဖြစ်နေတယ် ဆိုပါတော့... လူတယောက်ကိုယ့်အပေါ်ဘယ်လိုသဘောထားလည်း
ဘယ်လောက်အနေအထားနဲ့ကိုယ့်ကို ဆက်ဆံနေသလည်းဆိုတာ လူတိုင်းခံစားလို့ရတယ်..
သူဆက်ဆံတဲ့အနေအထား သူပြောဆိုတဲ့ အနေအထား ဆက်ဆံကြည့်လိုက်တာနဲ့သိပါတယ်..
စကားပုံလေးတောင် ရှိပါတယ် ..ကိုယ်ပေးသလောက်ဘဲ ကိုယ်ပြန်ရတယ်ဆိုတာပါ..
သူလေယာဉ်လက်မှတ်ကို ဘယ်လောက်နဲ့ဝယ်တယ်ဆိုတာလေးတောင် ကျမကိုပေးမသိချင်တဲ့ လူတယောက်ကိုကျမ ဆက်ပြီး ရင်းနှီးစွာ နဲ့ စိတ်ရော ကိုယ်ပါ ဆက်ဆံနေဖို့ မလိုတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်..
( ကျမအထင်မှားတယ်ဆိုရင်လည်း ပြောခဲ့ကြပါဦးနော်..)
မြန်မာပြည်နဲ့ဝေးရာမှာ ရပ်တည်နေကြရတဲ့သူတွေအတွက် အဓိကတော့ အလုပ်ပါဘဲ ...
အလုပ်အဆင်ပြေလားဆိုတဲ့စကားကို အချိန်တော်တော်များများမှာ မေးဖြစ်ပြောဖြစ်ကြပါတယ်..
ကျမအတွက် အလုပ်က ဒီနှစ်မှာ ကောင်းတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်...ဒါပေမဲ့ အခုလက်ရှိအချိန်ကို
ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ကျမဒီအလုပ်ကိုတော်တော် စိတ်ပျက်နေတာအမှန်ဘဲ...
လက်ရှိကျမတို့ကုမ္မဏီကြီးရဲ့ အကြီးဆုံးအုပ်ချုပ်သူက လုံးဝမကောင်းဘူးရှင်...ကိုးရီးယားဇာတ်လမ်း
တွေထဲမှာ မြင်ဖူးကြမှာပေါ့ ..ထိပ်ဆုံးကနေ အလုပ်သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေး မှန်သမျှကို ဂုတ်သွေး
စုပ်တဲ့ MD တွေ ကိုမြင် ဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်.... တနှစ်တခါလစာတိုးတဲ့ကိစ္စကအစ
ဝန်ထမ်းတွေကိုပေးနေတဲ့ အခွင့်အရေးထဲကနေ ပြန်ဖြတ်နေတဲ့ ကိစ္စ... အလုပ်မှာ လူမလောက်ဘူးဆိုတာ
သိနေပါရဲ့နဲ့..ဝန်ထမ်းထပ်မတိုးပေးတဲ့ကိစ္စ...ကျမတို့ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ လုပ်နေရတဲ့ လူတွေက
စက်ရုပ်တွေမှမဟုတ်တာလေ... Operator တယောက်အဖို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဘောင်ထက်
ကျမတို့အလုပ်ဝင်စဉ်တုန်းက လက်မှတ်ထိုးပေးထားရတဲ့ စာရွက်ပေါ်က အနေအထားတွေထက်ကို
နေ့တိုင်းရင်ဆိုင်နေရမယ် သိပြီးသားပါ... နောက်ဆုံးတော့လည်း ကျမတို့ အလုပ်သမားတွေအဖို့ကတော့ သဘောထားပြည့်ဝတဲ့ အုပ်ချုပ်သူ တွေနဲ့သာတွေ့ရပါစေလို့
ဆုတောင်းရုံမှ တခြားမရှိဘူးလေ... ကျမအခုပြောတဲ့ အခက်ခဲကို နိုင်ငံခြားမှာအလုပ်လုပ် ရပ်တည်နေရ
တဲ့သူတိုင်း နားလည်ပေးလို့ရမယ် ထင်တယ်.. ဒါကြောင့်မို့ ဒီနေရာလေးကနေ တစ်ခုလောက် ပြောချင်ပါတယ်...နိုင်ငံခြားဆိုတိုင်း အထင်မကြီးလိုက်ပါနဲ့ ...
နိုင်ငံခြားဆိုတာ တကယ်တော့ သည်းခံခြင်းတွေလက်ကိုင်ထားလို့ မာန်ချထားရတဲ့နေရာ တစ်ခုလို့ဘဲပြောချင်ပါတယ်..
ကျမသူငယ်ချင်းတချို့ကတော့ ပြောကြတယ် နင်က သိပ်သဘောမကောင်းနဲ့လေတဲ့
ကျမဒီတနှစ်အတွင်းမှာ ပိုက်ဆံလည်းတော်တော်ကုန်တယ်ရှင်..သွားတွေ ညီအောင် ပြင်တာလည်း မနည်းဘူးပေးလိုက်ရတယ်... လူလည်းတော်တော်လေးအီစိမ့်အောင်ဝေဒနာခံစားရတယ်ဆိုပါတော့
သွားတွေစီအာရုံရောက်နေလို့လားမသိပါဘူး...ကျမဒီနှစ်ထဲ ခါတိုင်းခံစားနေကြ သွေးအားနည်းတာကို
တောင် သိပ်မခံစားရသလိုဘဲ... မသိမသာနဲ့ ဘဲ နှစ်တနှစ်တောင်ပြီးတော့မယ်..ကျမမူးလွန်းလို့
ဆေးရုံဆေးခန်း ပြေးပြရတာတွေ မရှိလိုက်ဘူး..မျက်နှာဖြူဖပ်ဖြူရော်နဲ့ မူးနေတဲ့ နေ့တွေ မရှိခဲ့ပါဘူး...
ဒါကြောင့် ကျမအတွက် ဒီနှစ်ငွေကြေးအခြေအနေနဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေက သရေ ကျသွားပါတယ်..
ကျမအသက်တနှစ်ပိုကြီးသွားပါပြီ .... တနှစ်ပိုအိုလာပါတယ်... ကျမဘာတွေရင့်ကျက်လာလည်း
ဒီနှစ်ထဲမှာ ကျမဒန်ပေါက် ခဏခဏဝယ်စားဖြစ်တယ်ရှင်..အဲတာကတော့တကယ်မှတ်မှတ်ရရပါဘဲ
ရန်ကုန်မှာတုန်းက ကျမ ဒန်ပေါက် မစားပါဘူးဆီတွေသိပ်များလို့ပါ..
ဒါကြောင့်ကျမ တခုခုစားချင်တယ်ပြောရင် ကြေးအိုးလို့ပြောတာများပါတယ်...အခုဒီရောက်တာလည်း
ကြာနေပါပြီ... ဒီနှစ်ထဲကျမှ ဘာလို့ ဒန်ပေါက်ကြိုက်သွားလည်း မသိပါဘူး..ဒီကဒန်ပေါက်က ရန်ကုန်က
ဒန်ပေါက်လို ဆီမများလို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်..ဒါကြောင့် 2012 ကို ကျမဒန်ပေါက်ကြိုက်သွားတဲ့
ကျမဘာတွေ အကျိုးရှိတာတွေ လုပ်ခဲ့တာရှိလည်း ပြန်စဉ်းစားမိပါတယ်..
ကျမဘာမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူး...အလှုအတွက်MMYG မှာ အက်ဒမင်တယောက်အနေနဲ့ ပိုက်ဆံဝိုင်းကောက်ပေးတယ် ပြောရအောင်လည်း ကျမ အလှုခံပေးတဲ့ ပိုက်ဆံလေးက သေးသေးလေးပါ
အဲတာမို့လို့ တခြားသော အက်ဒမင်တွေ ကိုတောင် အားနာမိပါရဲ့...
2012 ထဲမှာ ကျမစိတ်ပါလက်ပါနဲ့ ယုံကြည်စွာ လုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အရာကတော့ ဘုရားတရားပါဘဲ
အကျိုးလိုလို့ ညောင်ရေလောင်းရာကနေ ..စိတ်ရဲ့ အေးချမ်းခြင်းတစ်ခု
ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုအဖြစ် ကျမလုံးဝသဘောပေါက်သွားတဲ့ နှစ်ပါဘဲ..
ထွက်ပေါက်မရှိသလို ခံစားနေရတဲ့ အဖြစ်တွေ တော်တော်များများ က ယုံကြည်မှု့တခုကြောင့်
ကျမဘဝအတွက် ဘာတွေ လုပ်ခဲ့လည်း ကျမ သေချာပြန်စဉ်းစားတယ်...
ဟိုလိုလိုဒီလိုလို တွေက အရမ်းများပါတယ်...ကျမချထားတဲ့ Plan တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်...
ကျမအချိန်ထပ်ပေးရဦးမှာပါ...သူများတွေလို မျိုး ကျမလည်းတနေ့မှာ BYE BYE TAIWAN ဆိုပြီး
နှုတ်ဆက်မဲ့အချိန် တစ်ခုကိုလည်း ကျမစဉ်းစားထားပါတယ်...
ဒီနှစ်ထဲမှာ ကျမတို့လို့ဘလော့ဂါ အမည်ခံထားတဲ့ သူတွေအားလုံးနီးပါးပေါ့ ဘလော့ထက်
Facebook မှာ ပိုနေကြတာများပါတယ်... ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဘလော့မှာစာတကြောင်းရေးပြီးရင်
တာဝန်ယူရတယ်...Facebook က တာဝန်ယူစရာမလိုဘူး..ပြောချင်သလိုပြောလို့ရတယ်..
နောက်ပြီး ကိုရေးလိုက်တဲ့ စာတကြောင်း ပုံတပုံကို တက်တဲ့ကောမက်ကလည်းမြန်တယ်..
အချင်းချင်းဆက်သွယ်ချင်ရင်လည်း Facebook က ပိုမြန်တယ်... အဓိကတော့ အဲတာလို့ကျမထင်တာဘဲ
ကိုယ်ပြောချင်တာကို အားလုံးတခါတည်းသိသွားအောင် လုပ်လို့ရတယ်လေ..
နောက်ဆုံးတော့ ကျမတို့တွေ အားလုံး ဘလော့မှာစာတင်ပြီးရင်တောင် Facebook မှာပါ
ကြေငြာရတဲ့အထိဖြစ်သွားတယ်.. အဲတာကတော့ 2012 ရဲ့ထူးခြားချက်လို့ထင်တာဘဲ
ဒါကြောင့် 2012 ဆိုတာ ဘလော့ဂါတွေ ရဲ့ Facebook နှစ်လို့ ပြောပါရစေ..
တချိန်မှာ ကျမလည်း အခုခင်မင်နေတဲ့ သူတွေအားလုံးကို နှုတ်ဆက်ပြီး ပျောက်ကွယ်မသွားဘူးလို့
မပြောနိုင်ပါဘူး... နောက်ဆိုရင် ပစ်ပစ် ဆိုတာ ဘယ်သူမှတောင် သိကြတော့မယ်မထင်ပါဘူး...
ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုအနေအထားနဲ့ ဖြစ်ဖြစ်ပါ ကျမရဲ့ဒီခံစားမှု့သံစဉ်ဆိုတာလေးနဲ့ ကျမခင်မင်ခဲ့တဲ့
လူတွေအားလုံးကို ကျမရင်ထဲမှာ ထာဝရ သိမ်းထားမှာပါ...
ကျမ တက်ဂ် ပိုစ့် မရေးတာကြာပါပြီ... အခုဒီပိုစ့်လေးကိုလည်း တက်ဂ်ပါရစေ..
ကျမလိုဘဲ ကျမချစ်ခင်ရတဲ့ ဘလော့ဂါတွေအားလုံး ဒီပိုစ့်လေးနဲ့အတူ
2012 ကိုနှုတ်ဆက်ပြီး 2013 ကိုကြိုဆိုကြရအောင်လို့ပြောပါရစေ...
ကဲ..အားလုံးဘဲ ဖြတ်ကျော်ခဲ့ကြတဲ့ 2012 ကိုတချက်လောက် ပြန်လှည့်ကြပါစို့လားရှင်..
2012 နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောချင်တာလေး ရေးချင်တာလေးပေါ့..
ကျမရဲ့ချစ်လှစွာသောမားမားဒမ်ဒမ် ..ညမတော်မိစံ .. မြတ်မွန်.. လမင်း ..အီးကု ..ကိုကိုးအိမ်...သကြားလုံး..သူကြီး..မကြီးချော..မကြီးမြသွေး..အမနတ်သမီး
ဂျက်စ်နဲ့ကိုလွင်ပြင်..တီတင့်.. မောင်မောင်..မိုးသက်..ကိုဏီလင်းညို ..ကိုညီလင်းသစ်...မကြီးမိုးငွေ့
မကြီးချစ်ကြည်အေး...မကြီးအလွမ်းမြို့လေး.. အထွန်း (စန်းထွန်း)
မောင်တလုံး.. ဘုန်းဘုန်းတောက်..ဆရာဟန်ကြည် ( ဆရာကတော့ပျောက်နေတာကြာလှပြီ)
... တခြားသူတွေလည်းရှိဦးမယ်..ကျမ ကဒီလောက်တက်ဂ်လိုက်တာပါ ကျန်ခဲ့ရင်လည်း
ကျမကိုခွင့်လွှတ်ပါ ..ကျမဆိုက်ဘားမှာ လောလောဆယ် Active ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုဘဲ Tag လိုက်တာပါ
ကျမရဲ့ facebook ထဲက ဘော်ဒါတစ်စု ဆိုပါတော့.. :P
2012 ကိုRock လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် Hiphop လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် ပေါက်ကွဲလိုက်ကြစမ်းပါ...
အားလုံးရဲ့ ပေါက်ကွဲသံစဉ်ကိုဖတ်ချင်ပါတယ် ....
အဆင်ပြေရင် လက်ခုပ်သံလေးကြားချင်ပါတယ် :P
ကျမအရမ်းအိပ်ချင်နေတာတောင် ဒီပိုစ့်ကို ပြီးအောင် ရေးသွားတယ်နော်...
အားလုံးရဲ့ 2012 ကိုလည်း ဖတ်ချင်တယ်ရှင် ...
အခုလောလောဆယ် ပစ်ပစ်ကတော့ ပိန်ပိန်လေး ဖြစ်နေတယ်ရှင်..
ဟူးးးးးးးးးးးးးး မနက်ဖန်တွေ ကို ရင်ဆိုင်ဖို့ အားမွေးနေတယ်ရှင် ..Bye Bye လို့မနှုတ်ဆက်နိုင်ခင်အထိပေါ့
Posted by blackroze at Sunday, December 02, 2012 8 comments
ကားပေါ်ကဆင်းလိုက်လိုက်ချင်း ဝေ့ခနဲ တိုက်လာတဲ့ လေပူတွေထဲမှာ
နွေရဲ့ ရနံတွေ ပါနေတယ်... ဖုန်နံလိုလို သစ်ရွက်ခြောက်နံလိုလို နဲ့ မရှုရှိုက်ရတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့
ကားလမ်းမဘေးကနေ ခြံဘက်ကိုဆင်ခြေလျော ဖဲ့ဆင်းသွားတဲ့ မြေလမ်းကလေး...
လမ်းကလေးအဆုံးမတော့ ဟောင်းနွမ်းစပြုနေပြီ ဖြစ်တဲ့ သံပန်းတံခါးလေး တချပ်.......။။။
ကျမ ဖြည်းဖြည်း ချင်း လမ်းကလေးအတိုင်း ဆင်းသွားလိုက်သည် ...
ခြံတံခါးရှေ့မှာ ရပ်ပြီး ခြံထဲလှမ်းကြည့်မိတယ်... ဘာမှကိုမပြောင်းလဲ သေးပါလား...
ခြံထဲက သက်မဲ့အရာဝတ္ထုတွေအားလုံးကတော့ ဟောင်းနွမ်းသွားတာကလွဲလို့ ဟိုးအရင်ကလိုဘဲ
ခြံအလည်တည့်တည့်မှာ ရှည်လမျော ပုံစံလေး ဆောက်ထားတဲ့ တထပ်အိမ်ကလေး....
အိမ်ခေါင်းရင်းက မန်ကျည်း ပင်ကြီင်္း ... အိမ်ရှေ့ ဘယ်ဘက်ခြံထောင့်မှာ ထင်းရုံလေး..အခုတော့ ထင်းရုံ
မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ ... အိမ်ထဲကမလိုတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ပလက်ကုလားထိုင်အဟောင်းတွေလာချ
ထားတဲ့ နေရာလေးဖြစ်လို့နေတယ်... အိမ်ရှေ့ ညာဘက်ခြံထောင့်မှာတော့ သုံးတဲ့သူမရှိတော့လို့
သံချေးအထပ်ထပ် တက်နေတဲ့ တုံကင်လေးး....ခြံထောင့်က နတ်စင်လေးးး
သြော်..အရာရာဟာ လွန်ခဲ့နှစ်ကာလတွေဆီကလိုဘဲ တည်ရှိနေတုန်း... ဒီသက်မဲ့အရာတွေကသာ
စကားပြောတတ်မယ်ဆိုရင် ကျမကိုသူတို့ ဘယ်လိုများခရီးဦးကြို ပြုကြမလည်းနော်
မလာတာကြာပြီနော် လို့ ပြောမလား... ဘယ်ရောက်ပြီးဘာတွေလုပ်နေလည်းလို့များမေးမလား
အိမ်ထဲဝင်လေ လို့ဘဲပြောမလား... ...။။။
ခြံတံခါးကို လက်လျှိုပြီး အသာဖွင့်လိုက်တယ်.... ဟိုးအရင်ကဆို ကျမတို့ညီအမ ဒီအိမ်ကိုလာမယ်ဆိုရင်
ကားပေါ်ကဆင်းလာကထဲက "" ကြီးကြီးရေ.."' ဆိုပြီး တကြော်ကြော်အော်ပြီး ဝင်လာနေကြ...
အခုတော့ ကျမတယောက်ထဲ တံခါးလေး အသာဖွင့်လို့ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် ဘဲဝင်သွားမိတယ်...
ခြံအဝလေးကနေ အိမ်ဘက်ချက်ချင်းမလျှောက်သေးဘဲ ကျမရပ်ပြီးကြည့်နေမိတယ်...
သတိရခြင်းဆိုတာတွေကို မျိုသိပ်လို့  အိမ်ဘက်လျှောက်သွားမိတယ်.. အိမ်ရှေ့ အုတ်လှေကားထစ်လေးမှာဖိနပ်ချွတ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ..အိမ်ထဲကနေ ဘယ်သူလည်းဆိုပြီးမေးသံနဲ့
အတူ...ထွက်လာတဲ့ ကျမရဲ့ ကြီးကြီး.... ..ကျမ မလာဖြစ်တဲ့ ဒီနှစ်တွေအတွင်းမှာ ကြီးကြီးတော်တော် အိုစာသွားတယ်... ကျမကိုမြင်တော့ ...
"" ဟယ်.. ပစ်ပစ် ...သမီးဘယ်တုန်းကပြန်လာတာလည်း..ဖုန်းလေးဘာလေးကြိုဆက်တာမဟုတ်ဘူး..
သမီး မေမေ ရောနေကောင်းလား...ပစ်ပစ်ပိန်သွားတယ်နော်......""
" ပစ် ပစ် ခဏပြန်လာလည်တာ. ကြီးကြီး..ပိန်တာကတော့ သူ့ဘာသူပိန်တာ...မေမေလည်းနေကောင်းပါတယ်.. ကြီးရော နေကောင်းတယ်ဟုတ်...အဘွားရော မတွေ့ပါလား... ""
ဖြေလည်းဖြေရင်း မေးလည်းမေးရင်းကျမဆွဲလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်း စားပွဲပေါ်လှမ်းတင်လိုက်သည် ...
ဘယ်သူလာတာလည်းဆိုတဲ့ အသံနဲ့အတူ အခန်းထဲကနေ ထွက်လာတဲ့ အဘွား.....
ကြီးကြီးက .."" အမေ ... ပစ်ပစ်လာတာလေ... အလည်ပြန်လာတာတဲ့... "
ကျမအဘွားရှေ့မှာ ငုတ်တုတ်လေးထိုင်လိုက်တော့... အဘွားက သူ့လက် ပိန်ခြောက်ခြောက်လေးတွေနဲ့
ကျမမျက်နှာကို လှမ်းစမ်းရှာတယ်...အဘွားလက်ပိန်ခြောက်ခြောက်လေးတွေနဲ့ ကျမမျက်နှာထိလိုက်တဲ့
အချိန်မှာ ကျမ ငိုချင်လာတဲ့စိတ်ကိုမနည်းထိန်းချုပ်ထားရတယ်...
ဆေးလိပ်သောက်လို့ မီးပေါက်လေးတွေ ဖြစ်နေတဲ့ အဘွားဝတ်ထားတဲ့ ယောဂီလုံချည်လေးက
အပေါက်သေးသေးလေးတွေကိုပဲ သဲသဲ မဲမဲ စိုက်ကြည့်နေမိလိုက်သည်....။။
"' သမီး...အလုပ်အဆင်ပြေတယ်မှတ်လား...ကြီးတို့ သမီးတို့ကို
သတိရတယ်...မပြန်လာတာကြာလို့ တခါလောက်အလည်လေးပြန်လာရင် ကောင်းမယ်လို့ ပြောနေ
မိသေးတယ်... အိမ်ကတော့သမီးမြင်တဲ့အတိုင်းဘဲ ခြောက်ကပ်သွားလိုက်တာ...ဟိုတလောက အိမ်ကိုဆွမ်းခံကြွနေကြ ဘုန်းဘုန်းတောင် မေးနေသေးတယ်... ကလေးတွေတယောက်မှ လာမလည်
ကြတော့ဘူးလားတဲ့... သမီး အချိန်ရရင် ဘုန်းဘုန်းကျောင်းကို ခဏသွားလိုက်ဦး "" ဆိုပြီး
ဟို အကြောင်းလေး ပြောလိုက် ဒီအကြောင်းလေးပြောလိုက်နဲ့ စကားလမ်းကြောင်းလေးလွှဲပေးရှာတယ်..။။
"" အိမ်မှာလည်း ခြောက်ကပ်နေတာဘဲ...အရင်ကဆိုကလေးတွေတရုံးရုံးနဲ့
အခုတော့ ကြီးတို့လည်း အသက်ကြီးပြီ လေ... အဘွားတောင် ဒီနှစ်ထဲကျန်းမာရေး သိပ်မကောင်းတော့ဘူး .... ကြီးကတော့ သမီးတို့ မောင်နှမတွေအားလုံးကို တခေါက်လောက်တော့
အကုန်လုံးဆုံစေချင်သေးတယ် သမီး..အဘွားရှိနေတုန်းပေါ့ သမီးရယ် "" တဲ့
ကျမဘာပြန်ဖြေရမလည်း ..ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ ကတိပေးလိုက်ရမလား...ဒါမှမဟုတ် မသိချင်ယောင်ဆောင်နေရမလား... တနိုင်ငံထဲမှာ အတူတူ
အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ ကျမတို့ညီအမ နှစ်ယောက်တောင် တချိန်တည်း အတူတူ ပြန်လာဖို့ အဆင်မပြေနိုင်သေးတာ..တယောက်တနေရာစီ ဖြစ်နေကြတဲ့ကျမတို့မိသားစုက မောင်နှမတွေအားလုံး ဘယ်လိုများ အရင်လိုတစုတဝေးတည်းဆုံမယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါတော့မလားလေ....
အရင်ကလိုတစုတဝေးထဲဆုံဖို့ဆိုတာ နောင်ဘယ်နှစ် နှစ်ကြာမှလည်း...
ဒီတသက်ရော ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား...ကျမ သေချာမသိဘူး...။။
ကြီးကြီး မေးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြေလိုက်..တချို့မေးခွန်းတွေကိုတော့ မသိချင်ယောင်ဆောင်လိုက်နဲ့
စကားပြောနေတုန်း ..ကလေးလေး တယောက်နောက်ဖေးဘက်ကနေ အိမ်ထဲဝင်လာတာတွေ့တယ်...
ကြီးကြီးက .. "" ပစ်ပစ် သူ့ကိုကြည့်စမ်းတဲ့ ဘယ်သူနဲ့တူသလည်းတဲ့ ""
ကျမစိတ်ထဲ ကျမအကိုလတ် နဲ့တော်တော်လေးဆင်တယ်..လို့ထင်တာနဲ့ ကိုကျော့်သားလား လို့
မေးတော့ ..ဟုတ်တယ်တဲ့...ကျမကြီးကြီးတို့ကိုလာနှုတ်ဆက်တုန်းကတော့ ဒီကောင်လေးက လသား
သာသာလောက်ဘဲရှိဦးမယ်ထင်တယ်...ခုတော့ သူငယ်တန်းစာမေးပွဲတောင် ဖြေထားတယ်တဲ့လေ..
ကျမတူလေးက ကျမကိုမြင်တော့ ရှက်အမ်းအမ်းနဲ့ကြည့်နေတယ်...
ကြီးကြီးကပဲ... "" ဖိုးသား...ဒါ သားအန်တီလေး ပစ်ပစ် ..သားကိုဓါတ်ပုံတွေပြဖူးတယ်လေ.. သားသိတယ်ဟုတ်... အခုအန်တီလေးက ခဏပြန်လာလည်တာ ...သားငယ်ငယ်လေးတုန်းကထဲက
အန်တီလေးက အဝေးကြီးမှာ အလုပ်သွားလုပ်နေတာ... '' ဆိုတော့ ကောင်လေးက ကျမကို အိုးတိုးအန်းတန်းနဲ့ လှမ်းရယ်ပြတယ်...ရယ်လိုက်မှ သူ့အဖေ နဲ့ပိုတူသွားတယ်..တပုံစံထဲဘဲ
ကျမ ..အစ်ကို လတ်ကို သတိရလိုက်တာလေ...ကျမအကိုလတ်အကြောင်းမေးတော့ တလတခါလောက်တော့အိမ်ကိုဖုန်းဆက်တယ်တဲ့ ..
ကလေးအတွက် ပိုက်ဆံတော့ ပို့ပေးပါတယ်တဲ့... ။။
အကိုလတ်အကြောင်းသိတော့ ...အကိုလတ်ရဲ့ သားကိုမြင်တော့
အိမ်ထောင်ရေးကံမကောင်းရှာတဲ့အကိုလတ်ကို သနားမိပါရဲ့..သူလည်းတယောက်တည်း အဝေးမှာ..
ဘယ်လိုများရုန်းကန်နေမလည်း ကျမလည်းမသိဘူး...အခုဆိုကျမတို့မောင်နှမတွေ မျက်နှာချင်းဆိုင်မတွေ့ဖြစ်ကြတာ နှစ်နဲ့တောင်ချီပြီးကြာပေါ့လေ ..။
အရင်ကဆို ကျမတို့ဝမ်းကွဲမောင်နှမတွေ အားလုံးကျောင်းပိတ်ရက်ဆို ဒီအိမ်မှာလာဆုံနေကြ...
အဘွားကမွေးထားတဲ့ သားသမီးတွေထဲမှာ ကြီးကြီးတယောက်ဘဲအပျိုကြီးလုပ်ပြီး..အဘွားနဲ့အတူတူနေတာ...
ကျန်တဲ့ သားသမီးတွေအားလုံးက ( ကျမအမေအပါအဝင်ပေါ့ )တယောက်တနေရာတယောက်တမြို့စီ..
ကျောင်းပိတ်တဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ အကုန်လုံးသော မြေးတွေက အဘွားအိမ်မှာလာစုနေကြ..
ကျောင်းဆရာမဖြစ်တဲ့ ကြီးကြီး က ကလေးတွေအကုန်လုံးကို ဘယ်အတန်းတက်ရမလည်း..
ကြီးကြီးတို့နဲ့ အတူတူနေတဲ့မြေးဆိုလို့ ငယ်ငယ်ကထဲက အဖေရောအမေရော ဆုံးသွားလို့
ကြီးကြီးကဘဲတာဝန် ယူပြီးခေါ်ထားတဲ့ ကျမအကိုလတ်တယောက်ဘဲရှိတယ်....
ကျမတို့တွေကျောင်းဖွင့်လို့ အိမ်ကပြန်လာခေါ်လို့ ပြန်ကြပြီဆိုရင် အကိုလတ်ခမျာ သနားစရာ..
ပြန်သွားတဲ့ သူတွေကို ကားနားအထိလိုက်လိုက်ပို့ရင်း လက်ကလေးတပြပြနဲ့ကျန်ခဲ့ရှာတာ.....
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ပျော်စရာကြီး..မောင်နှမ အုပ်တောင့်တော့ ကျမတို့ ကို
ဘယ်သူမှ လာအနိုင်မကျင့်ရဲကြဘူး...ကျမတို့ အုပ်စုနဲ့တင် ဘာကစားနည်းဘဲ ကစားကစား အဆင်ပြေတယ်.. တခြားကလေးတွေနဲ့ ရောကစားစရာကိုမလိုတာလေ... အခုတော့ အဲဒီအုပ်စုကြီးလည်း
တစစီကွဲလို့ တနေရာစီ ပြန့်ကျဲကုန်တယ်ဆိုပါတော့ ....။။
ကြီးကြီးနဲ့ထိုင်စကားပြောနေရင်းနဲ့ ..ကြီးကြီးက ရုတ်တရက်မေးတယ်..
"" ပစ်ပစ်ညအိပ်မယ်မှတ်လား.. တညအိပ်ပြီးမှ
မနက်ကျမှ ပြန်လေ... ကြီးကြီး အခန်းထဲ အိပ်ယာပြင်လိုက်မယ် ""တဲ့..
မျှော်လင့်တကြီးနဲ့ကြည့်နေတဲ့ ကြီးကြီးရဲ့ မျက်ဝန်းတွေကို မသိချင်ယောင်ဆောင်ရင်းး
"" ပစ် မအိပ်တော့ဘူးကြီးကြီး..လုပ်စရာတွေရှိသေးတယ်ကြီး ကြီး ဝယ်စရာတွေလည်းအများကြီးပဲ..
လက်ဆောင်ပေးဖို့တွေရော... ပစ်ပစ် လိုချင်တာတွေရော..ဘာမှလည်းသေချာမဝယ်ရသေးဘူး....
နောက်ပြီးမနက်ဖန်မှ ပြန်ရင် ရုံးကိစ္စအတွက်လည်း ပစ်လုပ်စရာတွေမမှီမှာစိုးလို့ ''''
စိတ်မကောင်းခြင်းများစွာနဲ့ပဲ ကြီးကြီးရဲ့မျက်ဝန်းတွေကို မသိကျိုးကျွံ ပြုလိုက်ရတယ်...
ရင်ထဲမှာတော့ အသံတိတ် စကားလုံးတွေနဲ့ တောင်းပန်နေမိတယ်... ။။
"" အင်းးပေါ့လေ..မအားဘူးလုပ်စရာတွေရှိတယ်ဆိုတော့လည်း ပြန်ပေါ့ ...နောက်တခေါက်လာတော့
ညအိပ်လေ နော်... "" တောင်းပန်သလိုလို ကြေကွဲသလိုလို ပြောလိုက်တဲ့ ကြီးကြီးရဲ့ စကားလုံးတွေကို
ကျမနားထောင်ဖို့ တကယ်ကို အင်အားမရှိခဲ့ပါဘူး...
အရင်တုန်းကတော့ ကျောင်းဖွင့်ခါနီး အိမ်က ပြန်လာခေါ်ရင် မလိုက်ချင် လိုက်ချင် ငိုမဲ့မဲ့ နဲ့ပြန်လိုက်သွား
နေကြကနေ...အခုတော့ ကြီးကြီး ကိုယ်တိုင်က တညလောက်နေပါလားလို့ခေါ်တာကို
ပေးလိုက်တဲ့ခွင့်ရက် 10 ရက်ဆိုတာ အသွားတရက်အပြန်တရက်ဖယ်လိုက်ရင် ကျမကိုယ်ပိုင်သုံးစွဲခွင့်
ရှိတာက 8ရက်ထဲရယ်ပါ...ကျမတယောက်ထဲ အတွေးတွေနဲ့ ချာလပတ်လည်ရန်ဖြစ်နေမိတယ်...။။
နေ့လည် ထမင်းစားတော့လည်း ကြီးကြီးကအရင်က ကျမတို့ကလေးတွေ တအုပ်ကြီး ထမင်းတဝိုင်း
ထဲကျွေးရင် ဆူညံလွန်းလို့ အော်ရ ဟောက်ရတဲ့အကြောင်း သတိတရနဲ့ပြန်ပြောရှာသေးတယ်..
အခုတော့ထမင်းဝိုင်းမှာ ကျမရယ်..ကြီးကြီးရယ်..အဘွားရယ်.. ကျမတူကလေး ဖိုးသားရယ်...
တိတ်ဆိတ်လို့....အဘွား ကအသက်ကြီးလာတော့ သူ့ဘာသာ စားရင် လက်တွေတုန်ပြီးပါးစပ်ထဲ
ရောက်တဝက် ဖိတ်တဝက် ဖြစ်လွန်းလို့ ...ကြီးကြီးကပဲ သူလည်းစားရင်း အဘွား ကိုလည်းခွံရင်းနဲ့
ကျမတို့ငယ်ငယ်လေးတုန်းက ညဘက်ဆို အဘွားက အသုပ် တခုခု သုပ်ပြီး ကလေးတွေအားလုံးကို
တယောက်တလုတ် ခွံပေးခဲ့တာပြန်သတိရမိတယ်..အခုလို အဘွား အိုမင်းလာတဲ့ အချိန်မှာ ကျမတို့တွေထဲက တယောက်ယောက် အနားမှာနေပြီး အဘွားငယ်ငယ်က ခွံပေးခဲ့သလို မျိုး
အဘွားကိုပြန်ခွံပေးသင့်တယ်လို့တွေးမိပေမဲ့လည်း .....အတွေးက အတွေး အဖြစ်နဲ့တင် ရပ်သွားတယ်..။။
ကျမကပဲ..ကြီးကြီး ကို.. "" ကြီးကြီး..အဘွားကိုပစ်ပစ် ခွံပေးလိုက်မယ်.. ဆိုပြီး ကြီးကြီးဆီကဇွန်းကိုယူပြီး
အဘွားကိုလှမ်းခွံပေးတော့ ..အဘွားက .."" သာဓု..သာဓု...သာဓု ... "" တဲ့လေ.....
အသက် ကိုခပ်ပြင်းပြင်းရှုလို့ ပင့်သက်တချက်ကို လူကြီးတွေမသိအောင်ချရင်း...မျက်ရည်ကိုမသိမသာထိန်းရင်း ..ကျမတို့ထမင်းဝိုင်းလေးက ခြောက်ကပ်ကပ်နဲ့ ပြီးဆုံးသွားတယ် ဆိုပါတော့ ....။။
အဘွားက ဆုတွေတသီတတန်းကြီးပေးရင်းနဲ့ မျက်ရည်ကျတော့ ...
ကြီးကြီးက အဘွားကို... "" အမေ ..မငိုနဲ့လေတဲ့ ..ကလေးက တခါတလေ ပြန်လာလည်တာကို
အမေငိုတော့ ဘယ်စိတ်ကောင်းမလည်းတဲ့လေ.... "" တကယ်တော့ ကြီးကြီးကိုယ်တိုင်လည်း မျက်လုံးတွေနီရဲလို့.....။။
ကျမ ဒီတခါတော့ ကျလာတဲ့မျက်ရည်ကို မထိန်းတော့ပဲ အဘွားနဲ့ကြီးကြီးကို ဦးချကန်တော့ရင်းး
ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုမိတယ်...ကြီးကြီးကတော့ ကျမကိုဆွဲထူရင်း မျက်ရည်တွေသုတ်ပေးရှာတယ်...။။
ကျမပြန်ခါနီးတော့ ကြီးကြီးက ဓါတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်လေးတခု အခန်းထဲက ယူထုတ်လာပြီး
အထဲက ဓါတ်ပုံကလေးတပုံ ထုတ်ပြတယ်...
"" ကြီးကြီး ဟိုတလောက အိမ်ရှင်းရင်းနဲ့ တွေ့တာ... အဘွား အလှုလုပ်တဲ့နှစ်မှာလေ ..သမီးတို့မောင်နှမတွေ အားလုံးကိုစုပြီးဓါတ်ပုံရိုက်ထားတာ... အားလုံးပါတယ်...သမီးကြည့်ကြည့် ..""
ဆိုပြီး လှမ်းပေးတယ်...ဟုတ်ပါရဲ့...ဓါတ်ပုံထဲမှာ ကျမတို့မောင်နှမတွေအားလုံး တစုတဝေးကြီး
အိုက်တင်အမျိုးထုတ်လို့ ရိုက်ထားတာ... ကျမညီမဆို သူကအငယ်ဆုံးမို့ အရပ်ပုနေလို့
သူ့ကိုမမြင်မှာစိုးပြီး ခြေဖျားထောက်ထားတယ်ဆိုတာတောင် သိသာပါရဲ့ ...။။ခြေဖျားထောက်ပြီး
ခေါင်းကို အတင်းမော့ထားရှာတာ....ကျမ အမအကြီးဆုံးက အဲတုန်းကခေတ်စားတဲ့ ဆံပင်တခြမ်းစောင်းကေနဲ့ ပဲများနေတာ.... အကိုလတ်ကတော့ ကျောင်းစိမ်းဘောင်းဘီလေးနဲ့..
မော်လမြိုင်က လာတဲ့ အကိုနှစ်ယောက်ကတော့ တယောက်ပခုံးတယောက်ဖက်လို့...
အမလတ်ကတော့ ခါးလေးထောက်လို့ ...အကိုကြီးဆုံးကတော့ ယောပုဆိုးနဲ့အကျအနဝတ်စားထားတာ.. ကျမကတော့ မှုန်ကုပ်ကုပ် ပုံစံလေးနဲ့..
အမငယ်ကတော့ သူကအရမ်းပိန်လွန်းတော့ သူပိန်တာလူသိမှာစိုးလို့ ဓါတ်ပုံရိုက်တိုင်း သူများနဲ့ကွယ်လေ့ရှိတယ်..အခုပုံထဲမှာလည်း ကျမ အကိုလတ်ဘေးနားမှာ ခပ်ကွယ်ကွယ်ရပ်နေတာ..။။
ဒီပုံလေးထဲမှာ ကျမတို့ တွေအားလုံးအကုန်တစုတဝေးထဲပါလားနော်....။။
ကျမ ကြီးကြီးစီကနေ အဲဒီဓါတ်ပုံလေးတောင်းမိတယ်...
"" ကြီးကြီး..ပစ် ဒီပုံလေးယူသွားမယ်နော်... နောက်မှ ပုံထပ်ကူးပြီး
ကြီးကြီး က ..ယူသွားတဲ့ ..တခြားမောင်နှမတွေစီလည်း သေချာ ပို့ပေးလိုက်နော်တဲ့..
ဒီပုံလေးထဲမှာ သမီးတို့မောင်နှမတွေ အားလုံးပါတယ်တဲ့...အမှတ်တရ ပုံလေးတဲ့...
သေချာသိမ်းထားပါတဲ့.... စိတ်ချပါကြီးကြီး...ဒီပုံလေးကို သေချာသိမ်းထားပါ့မယ်လို့...
တခြားသူတွေစီကိုလည်း သေချာရောက်အောင်ပို့ပေးပါမယ်လို့ ကျမ ချက်ချင်းပဲ ကတိပေးလိုက်မိတယ်.. ။။
ကျမပြန်တော့မယ်ဆိုတော့ ကြီးကြီးက ကားစီးဖို့ ဂိတ်အထိမသွားနဲ့တော့တဲ့..နေ့လည်ဘက်ဆို
ဘတ်စ်ကားလာတော့ ကျမတူလေးက ကားနားအထိ လိုက်လာပြီး
"" အန်တီလေး နောက်ခါလည်း လာလည်နော် "" တဲ့ လက်ပြနှုတ်ဆက်ရင်း မှာတယ်...။။
ကားထွက်လာတော့ အိမ်ရှေ့ ကားလမ်းမဘေးနားလေးမှာ လက်ကလေးပြ ရင်း ကျန်ခဲ့တဲ့
ခြံဝသံပန်းတံခါးနားလေးကနေ ရပ်ကြည့်နေတဲ့ ကျမရဲ့ကြီးကြီး ...
အိမ်ရှေ့ ပြတင်းပေါက် နားလေးကနေရပ်နေကြည့်တဲ့ကျမရဲ့အဘွား...
ဓါတ်ပုံလေးတပုံ ကိုင်ပြီး ကားပေါ်ပါလာတဲ့ ကျမ....
ကျမကိုင်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံလေးထဲမှာတော့ ကျမတို့ မောင်နှမတွေအားလုံး
ဓါတ်ပုံကလေးကိုကြည့်နေရင်းနဲ့ ကျမ မျက်ဝန်းတခုလုံးဝေဝေဝါးဝါး ဖြစ်လာတယ်...
နောက်တော့ မျက်ရည်ဆိုတဲ့ အရာတွေက တဖြည်းဖြည်းအိုင်ထွန်းပြီး မျက်လုံးအိမ်ကတဆင့်
ပါးပြင်ပေါ်..ပါးပြင်ပေါ်ကတဆင့် ..ဓါတ်ပုံကိုင်ထားတဲ့ကျမ လက်ပေါ်ကို တစက်ချင်း လိမ့်ဆင်းသွားတယ် .......။။။။
Posted by blackroze at Monday, November 12, 2012 23 comments
ပျော်စရာကြီးပေါ့... ကျမအဖို့ကတော့ သိပ်တော့မထူးပါဘူး ..ဒီလိုနဲ့ဘဲတနှစ်ပြီးတနှစ်ကို
အသက်လေးကလည်း ထိပ်စီးတွေလည်းခဏခဏပြောင်းခဲ့ပြီဆိုတော့ သီတင်းကျွတ်ဆိုတာလည်း
ကိုယ်နဲ့တောင် မဆိုင်တော့သလိုပါဘဲလေ... (ရုံးက ကိုယ့်လက်အောင်က ဝန်ထမ်းတွေလာကန်တော့တာ
လွဲရင် ပေါ့ ) ..ကျမလည်းတခါတခါ လူ့ဘဝကြီးသေချာစဉ်းစားမိပါရဲ့... ။ ဖြစ်လိုက်ပျက်လိုက်နဲ့
မြဲတည်ခြင်းဆိုတာလည်း ရှားပါးလှတာမို့ ... လက်ရှိဘဝလေးကိုဘဲကျေနပ်အောင် ဖြတ်သန်းနေလိုက်တော့တယ် ...။။
တခါတလေတော့လည်း ကိုယ်လည်းပုထုဇဉ်ပေမို့ သံယောဇဉ်အပိုင်းအစလေးတွေကို ပြန်ပြန် လှည့်ကြည့်မိပါရဲ့လေ...တခါတလေ ပေါ့ရှင် ..စာအုပ်ကြားထဲမှာ သိမ်းထားတဲ့ စာလေးတွေ ..အမှတ်တရ
ရိုက်ဖူးခဲ့တဲ့ ပုံလေးတွေ .. အပြန်အလှန်ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ လက်ဆောင်လေးတွေ ...ပြန်ထုတ်ကြည့်မိတာလွဲလို့
ရင်ခုန်သံဆိုတာကလည်း အသက်ရှင်ဖို့ ခုန်တယ်ဆိုရုံလေးပါဘဲ ...။ သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်လို့
လမ်းခွဲခဲ့ကြတဲ့ ချစ်သူကိုလည်း တခါတလေ ဘာတွေလုပ်နေမလည်းလို့တွေးမိတာလေးကလွဲလို့
အဲတာနဲ့ဘဲ အသက်လည်းထိပ်စီးတွေချိန်းလို့ လေးဆယ်ကျော်လာတယ်ဆိုပါတော့ ... ကျမလည်း ရာထူးတစ်ခုတိုးလာတယ်... မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေက ဘာမှကိုအကျွေးအမွေးမလိုဘဲနဲ့ တိုးပေး
လိုက်တဲ့ ရာထူးဂုဏ်ပုဒ်လေးပေါ့ရှင်....အပျိုကြီး ....တဲ့ ..။။။
ကျမကတော့ လက်ရှိဘဝကိုဘဲ အရေးထားပြီးဖြတ်သန်းချင်တဲ့ လက်တွေ့သမားဆိုတော့ ဘယ်လိုဘဲ
ခေါ်ခေါ် ဘယ်လိုဘဲသတ်မှတ်သတ်မှတ်ပါ..သိပ်တော့ အထူးတလည် ခေါင်းထဲထည့်မစဉ်းစားပါဘူး....
ကိုယ်ကလည်း တကယ်အပျိုကြီး လုပ်နေတာဘဲဆိုတော့လေ....အပျိုကြီး ဆိုတဲ့ အခေါ်အဝေါ်ကို လက်ခံပါတယ်... ။။
ဒါပေမဲ့ ခက်တာက လူတွေရှင့်..ရှင်တို့သိကြရဲ့လား..ကျမဘာသာအပျိုကြီးဘဝနဲ့ အေးချမ်းစွာဖြတ်သန်း
နေတာကို လာလာခလုတ်တိုက်တယ်ရှင်.. ဘယ်တော့စားရမှာလည်းတို့
ဒီတိုင်းဘဲနေတော့မှာလားလို့ ... တကိုယ်တည်းအဖော်မရှာတော့ဘူးလားတို့ ... သီတင်းကျွတ်တော့မယ် နော် ဆိုတာတို့ ...။။အဲလို စကားလုံးလက်နက်ပုန်းတွေနဲ့ လာလာပြစ်တယ်ရှင်...
ကျမကလည်း ရှောင်လင်တို့ ဝူတန် တို့မှာ သိုင်းမသင်ဖူးတော့ အဲလို လက်နက်ပုန်းတွေကို မရှောင်တတ်ဘူး....အလူးအလဲခံရတော့ပါဘဲ ...။။
ကျမကတခါတလေ ငယ်သူချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနဲ့ တွေ့လို့ စကားပြောမိတာမျိုးလေး..
တခါတလေ အလုပ်သဘောအရ ဆက်ဆံရတဲ့ အမျိုးသားမိတ်ဆွေနဲ့ စကားပြောမိတာမျိုးလေးများ
မတွေ့လိုက်နဲ့ ..တွေ့လိုက်တာနဲ့.. " ဟော ကြည့် အပျိုကြီး စွံတော့မယ်ထင်တယ်တို့ "
" အပျိုကြီး ရင်တွေခုန်နေတယ်ဆိုတာတို့ " အဆိုးဆုံးကတော့ အပျိုကြီး ဘဲကြောင်နေတယ် ဆိုတဲ့
စကားပါဘဲ...။။ ကျမအဲလိုစကားမျိုးကို သိပ်မုန်းတယ်ရှင်....ဘဲကြောင်တယ်ဆိုတာက စော်ကားသလိုပါဘဲ ..အဲလိုစကားတွေကို မုန်းလို့
ပိုပြီးအနေအထိုင် ကျစ်လစ်အောင် ဆင်ခြင်ရင်းနဲ့ အပျိုကြီးဖြစ်မှန်းမသိကို ဖြစ်သွားတော့တာဘဲ...။။
အပျိုကြီးဆိုတိုင်းလည်း မစွံလို့ ယူမဲ့သူမရှိလို့ အပျိုကြီးဖြစ်သွားတဲ့ သူတွေရှိသလို ကိုယ်တိုင်က အချစ်ရေး အချစ်ရာကို စိတ်မဝင်စားတော့လို့ .. တယောက်တည်းအေးဆေးနေချင်လို့ အပျိုကြီးဘဝကို
ရွေးချယ်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိကြတာဘဲလေ... အဲတာကို သဘောမပေါက်ကြဘူးရှင် တခုခုဆို..အပျိုကြီးဆိုပြီး မေးငေါ့ချင်သလိုလို မျက်စောင်းထိုးချင်သလိုလို ...ဟင်းးးးးးးးးးးးးး
တကယ်ကို စိတ်ကုန်မိပါရဲ့လေ ....။။
သင်္ကြန်ဆိုလည်း " ကဲဘယ်လိုလည်း မြန်မာလိုနှစ်ကူးပြီနော် "တဲ့
ကဲ..အဲတာသာကြည့်တော့ သင်္ကြန်နဲ့ အပျိုကြီးဘာဆိုင်လည်းရှင် ...
New Year ဆိုလည်း " ဘယ်လိုလည်း နှစ်တောင်ကုန်တော့မယ်နော်တဲ့လေ.. "
သီတင်းကျွတ်ဆိုရင် ကျမတို့လို့အပျိုကြီးတွေအဖို့ကတော့ တော်တော်နေရထိုင်ရခက်တယ်ရှင်
သူတို့ဘာသာမင်္ဂလာဆောင် တာ ဆောင်ပေါ့ လူကိုပါ ခလုတ်တိုက်တာဆိုးပါ့ရှင်...
ဟိုလူကတော့ ဘယ်နေ့ မင်္ဂလာဆောင် ..ဒီလူကတော့ ဘယ်နေ့ဆောင်မှာ ..ဆိုတာမျိုးတွေ ပြောရင်းနဲ့
ဘယ်လိုလည်းသီတင်းကျွတ်ပြီနော် ဆိုပြီး လူကိုပါ စစ်ဆင်ရေးဝင်သွားတော့တာပါဘဲ...။။
အဲတော့သီတင်းကျွတ် ဆိုရင် ကျမအဖြစ်က ပရီးမီးယားလိဂ် ဖိုင်နယ်မှာ ပင်နယ်တီ ဖမ်းရတော့မဲ့
ဂိုးသမား လိုပါဘဲ...ဂိုးပေါက်ရဲ့ ဘယ်ဘက်ထောင့်ကိုဘဲပြေးကပ်ရမလိုလို ညာဘက်ထောင့်ကိုဘဲ
ပြေးကပ်ရမလိုလို ...ဂိုးပေါက်အလယ်မှာဘဲ ခုန်ဆွခုန်ဆွ လုပ်နေရမလိုလို ...နေရထိုင်ရ တယ်ခက်သကိုးးး ...။။
အပျိုကြီးတကယ်တည်းဆိုပေမဲ့ အားလုံး အိုကေ ပါတယ်လို့လေ..
ဘဝကိုတည်ငြိမ်စွာနဲ့ ဖြတ်သန်းနေတဲ့ ရင့်ကျက်တဲ့ အမျိုးသမီးတယောက်လို့ဘဲ မြင်စေချင်တယ်ရှင်...
ကဲ.ရှင်တို့တွေလည်း အနားမှာရှိတဲ့သူတွေကို လက်တို့ပြီးပြောလိုက်စမ်းပါရှင် ....။။
(ဘာရယ် မဟုတ်ပါဘူး..ဒီနေ့အလုပ်နားလို့ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲစားရင်း အပျိုကြီးအမတွေကိုယ်စား
စကားချပ် ... ပစ်ပစ်ကတော့ အပျိုကြီးမလုပ်ဘူးနော် :P )
ပုံကတော့ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ရှင် ...
Posted by blackroze at Thursday, November 01, 2012 12 comments
ပုံလေးကို wallcoo.net ကနေယူသုံးပါသည်
Posted by blackroze at Saturday, October 27, 2012 10 comments
ကျမတို့အလုပ်ရဲ့ MD ကြီးကဂျင်မီ ဆိုတဲ့ လူကြီးပါ .... ကျမတို့စက်ရုံခွဲမှာတော့ သူအကြီးဆုံးဆိုပါတော့
အဲဒီ ဦးဂျင်မီက တလတခါ လောက် စစ်ဆေးရေးဝင်နေကြပါ....။ ကျမတို့ကလည်း သူစစ်ဆေးရေး
ဝင်မဲ့နေ့တိုင်း အထူးအစီအစဉ်နဲ့ သန့်ရှင်းရေးလုပ် ..သိမ်းဆည်းစရာရှိတာသိမ်းပေါ့ ..
ဒီလထဲမှာလည်း သူလာမယ်လာမယ်နဲ့ မလာသေးပါဘူး..လတောင်ကုန်တော့မှာပါ...
အဲတာနဲ့ဟိုရက်ပိုင်းက လာမဲ့သောကြာနေ့ သေချာလာမယ်ဆိုပြီး သတင်းကြားပါတယ်..။အဲတာနဲ့
သန့်ရှင်းရေးလုပ်စရာရှိတာတွေလည်း လုပ် ပေါ့... မနေ့ကတော့ သတင်းတခုထပ်ကြားပါတယ်...။
မလာတော့ဘူးတဲ့ ..ရုံးခန်းထဲမှာ တခြားအလုပ်တွေအရမ်းရှုပ်နေတော့ လာပြီး မစစ်တော့ ဘူးတဲ့..
ကျမတို့လည်း ဝမ်းသာအားရနဲ့ အေးဆေးဖြစ်သွားပြီပေါ့..( စူပါဗိုက်ဆာက အစပေါ့ ဂျင်မီမလာတော့ဘူးလို့ဘဲ ထင်ထားတာပေါ့ )
ဒီမနက်လည်း အလုပ်တက်တော့ ခါတိုင်းနေ့တွေလိုဘဲပေါ့ ခါတိုင်း နေနေကြပုံစံနဲ့ဘဲနေကြတာပေါ့လေ
ညနေ 4နာရီလည်းထိုးရော ဗြုန်းကနဲ လက်ထောက်စူပါဗိုက်ဆာက ထွက်လာပြီး "အခုလေးတင်ဖုန်းဆက်လာတယ်...ဂျင်မီလာမယ်တဲ့..
15မိနစ်အတွင်းရောက်မယ်တဲ့ .. နင်တို့တွေ ဘာပြသနာမှမဖြစ်စေနဲ့နော်..လုပ်စရာရှိတွေသေချာလုပ် "
ကျမတို့ကလည်း ဗရမ်းဗတာနေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး..စားပွဲအံဆွဲထဲမှာ အလုပ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ
ကလွဲရင်တခြားပစ္စည်းတွေမထားရဘူးလို့ ပြောထားတယ်...ဒါပေမဲ့ အံဆွဲထဲမယ်.. ပိုက်ဆံအိတ်လေးဘာလေး ..တချို့တွေကျတော့ ကော်ဖီထုပ်လေးပေါ့ ..တချို့ကျတော့လည်း ကိုယ်သုံးနေကြ လက်လိမ်းတဲ့ lotion လေး တိုလီမိုလီပစ္စည်းလေးတွေ တကိုယ်သုံးတာလေးတွေ
ထည့်ထားတာပေါ့ ..ကျမဆိုလည်း ထမင်းစားပြီးရင် သွားတိုက်နေကြမို့ သွားတိုက်ဆေးနဲ့ သွားတိုက်တံ
ထည့်ထားတဲ့ ဗူးလေးထည့်ထားတယ်ပေါ့ ..အဲလို အလွယ်ယူလို့လွယ်အောင် ထည့်ထားကြတာပါ..
copier ပေါ်မှာဆိုလည်း တယောက်က သုံးပြီးရင် ကိုယ်မလိုချင်တဲ့စာရွက်ကိုတခါတည်း
ပြန်သိမ်းသွားရမယ်လို့ ပြောထားပေမဲ့ ဘယ်သူမှ အဲလိုမလုပ်ကြပါဘူး.... သုံးလေးရက်တခါမှ copier ပေါ်က စာရွက်တွေ တယောက်ယောက်က ကြုံသလို ရှင်းလိုက်တာပါဘဲ...
ကိုယ်ဟာနဲ့ကိုယ်တော့ နားလည်မှု့လေးနဲ့ နေနေ ကြပေမဲ့ လူကြီးလာစစ်မယ်ဆိုရင်တော့ အဲလို
အနေအထားက မရတော့ဘူးလေ... အဲတော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံဖြစ်အောင် ရှင်းရလင်းရ တာပေါ့လေ..
သူကမလာစစ်တော့ ဘူးဆိုတော့ အကုန်လုံးကအေးဆေးဖြစ်နေရာကနေ ဗြုန်းဆို 15မိနစ်အတွင်းရောက်မယ် ဆိုတော့ ...စဉ်းသာ စဉ်းစားကြည့်ပါတော့ရှင်...။။
အလုပ်ထဲက လူတွေ ပျာယာခတ်သွားပုံများ (ကျမအပါအဝင်ပေါ့) video မှတ်တမ်းတောင် တင်ထားလိုက်ချင်ပါရဲ့ .....း)
ကော်ဖီဗူးလေး တဗြွတ်ဗြွတ် လုပ်နေတဲ့ သူကလည်း အူယားဖားယား ပြေးပြီး အိမ်သာသွားပြီး ကော်ဖီဗူးကိုအပြတ်ရှင်းရတယ်.....
ကိုဖုန်းခင်တွေကလည်း အိမ်မှာအားသွင်းရင် မီတာခကုန်မယ်ဆိုးလို့လား မသိပါဘူး..
အလုပ်ထဲေ၇ာက်မှ လွတ်တဲ့ပလက်ပေါက်တွေမှာ ဖုန်းတွေအားသွင်းထားတဲ့ သူတွေကလည်း
အလျင်အမြန် နဲ့ ကိုယ့်ဖုန်းကို ကိုယ်ပြန်သိမ်း၇တယ်...
copier ပေါ်ကစာရွက်တွေကလည် မြန်မြန်ပြေးသိမ်းကာမှ စာရွက်တွေက လွတ်ကျလို့ ပြန့်ကျဲကုန်တာ
တရွက် ချင်းစီ ပြန်ကောက်ရတယ်ရှင်..အဲစာရွက်တွေ ပြေးသိမ်းတဲ့ကောင်မလေး စာရွက်လိုက်ကောက်ရင်းချော်တောင်လဲတယ်ရှင်...
အံဆွဲထဲမှာ အလွယ်ထည့်ထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုလည်း သင့်တော်မဲ့နေရာတခုခု ရှာပြီး လူတိုင်းကအပြေးအလွှားပေါ့ရှင်... ပြေးဖွက်ရသေးတယ်...
တချို့တွေက ကိုယ့်ရဲ့ ID ကဒ်တွေပေါ်မှာ သဘောကျတဲ့ ကိုးရီးယားမင်းသားပုံတွေကိုယ့်ရည်းစားပုံတွေ ကပ်ထားတာတွေရှိတယ်လေ....အဲလို ပုံတွေလည်း မြန်မြန် ဖြုတ်သိမ်းရတယ်ဆိုပါတော့...
ကျမတို့ section တခုလုံး 15 မိနစ်အတွင်း အပြေးအလွှား လှုပ်ရှားနေပုံများလေ...
ရှောင်လင်ကျောင်းမှာ သိုင်း ပြပွဲကျင်းပနေတဲ့ အတိုင်းပါဘဲ...လှစ်ခနဲလှစ်ခနဲ ဝှစ်ခနဲဝှစ်ခနဲ
နေတာပါဘဲ ....ဓါတ်လှေကားနဲ့ အနီးဆုံးနေရာကလူကတော့ အပေါက်စောင့်သဘောပေါ့ရှင်
ဓါတ်လှေကား တက်လာမဲ့ အချိန်ကိုမျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့်ပြီး သတင်းပို့ရမဲ့လူဆိုပါတော့
ဟင် ...မလာသေးပါလား မလာသေးပါလားနဲ့ ...လုပ်ပါဦး ဖုန်းလေးဘာလေးဆက်မေးကြည့်ပါဦးဆိုတော့ ........
အဟင့် ....ဂျင်မီ လူဆိုး....သမျန်းတို့ကို လှည့်စားတယ်..မလာတော့ဘူးတဲ့ .....
ကျမရဲ့စီနီယာတယောက်တော့ တိုးတိုးလေး လာပြောလေရဲ့..
" ငါ့ကော်ဖီဗူးလေး နှမြောလိုက်တာဟယ်... အလုပ်လာရင်းနဲ့ 7-11 ကဝင်ဝယ်လာတာ 39 ကျပ်တောင်
ပေးရတာ " တဲ့လေ... :P ....... ။။။။။
(ပုံလေးကိုတော့ Google ကနေယူသုံးတာပါ )
Posted by blackroze at Tuesday, October 23, 2012 17 comments
ကျမဘလော့ရဲ့ C box မှာ နိုင်ငံတကာကဧည့်သည်တွေအရမ်းများတယ်..
အဲဒီ Cbox ကြီး ဖြုတ်ထားလိုက်ရင် ကောင်းမယ်ထင်တယ်...
ဘလော့ထဲဝင်လိုက်တိုင်း Cbox ကိုတွေ့လိုက်ရင်
ကျမလွန်တယ်ဖြစ်ဦးမယ်... ( ကျမလွန်တယ်ဘဲထားလိုက်ပါတယ် )
အိမ်မှာလား....သိပ်တော့မထူးပါဘူး နေလို့မပျော်ဘူးဆိုရုံလောက်ပါဘဲ :P
တခါတလေ ရယ်တယ် တခါတလေ ငိုတယ် ဆိုပါတော့...
ကျမ အက်ဆေးတပုဒ်ကို ရေးမလို့ သေချာ ခံစားကြည့်နေတယ်..
ခက်တာက ရေးမယ်ဆိုပြီး ကျမ စာရိုက်တဲ့နေ့ တိုင်း
တခုမဟုတ်တခု စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စရာတွေနဲ့
ကြီးကြီးမားမား မရှိခဲ့ရင်တောင် သေးသေးဖွဲဖွဲလေးကြောင့်
စိတ်ထဲဒေါသဖြစ်သွားပေမဲ့ တခါတလေ ဘာမှမဖြစ်သလိုလေး
ဟန်ဆောင်စကားပြောနေရတာလည်း တော်တော်လေးဆိုးဝါးတဲ့ ခံစားချက်ပါဘဲ..ကျမအခုလို ရေးလိုက်ရင် တချို့သောလူတွေက
( ငါ့ကိုများပြောတာလားမသိဘူးဆိုပြီး )
တောင်ထင်မြောက်ထင်..သို့လော သို့လော ထင်ကြဦးမယ်ရှင်...ကိုယ့်ဘာကို စိတ်ထဲရှိတာရေးလိုက်တာပါ..ဘယ်သူကိုမှမရည်ရွယ်ပါဘူး...
ကိုယ့်ဘာသာတောင် အသက်ရှုတာတောင် ပြင်းပြင်းမရှုရဲဘူး..
အသံထွက်မှာဆိုးလို့ မျဉ်းမျဉ်းလေး ရှုနေရတယ်...
အဲတာနဲ့ ဘဲ အသက်ရှုကျပ်နေတာ ကြာပေါ့....
ဒါကြောင့် မျိုးကျော့မြိုင်က လူဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခလို့ သီချင်းဆိုသွားတာနေမှာ ။။
ဒါပေမဲ့ ဘာဘဲပြောပြော ကျမ အခု ဆော့နေတဲ့ Farmvalle2မှာတော့ ကျမမွေးထားတဲ့ကြက်မတကောင်က ဥတခါဥရင် နှစ်လုံးပြူးဥတာကိုတော့
တော်တော် သဘောကျသား..ဥတခါကောက်ရင် ကြက်ဥ အမွှာပြူးတပြူးရတယ်လေ...
ကျမရူးနေတယ် ထင်ပါရဲ့နော်... ဟားဟာား :P
(ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး ဒီမနက် ဆားချက်လိုက်တာလေ.. :P )
Posted by blackroze at Friday, October 12, 2012 13 comments
“A CLEAR CONSCIENCE IS THE SOFTEST PILLOW ” “လိပ်ပြာသန့်ခြင်းသည် အနူးညံ့ဆုံးသောခေါင်းအုံးဖြစ်သည်.. ”
ဒီစာသားလေးကို ကျမအရမ်းသဘောကျမိတယ်..တကယ်တော့ လူတွေဟာမရိုးသားကြဘူး (ကျမအပါအဝင်ဆိုပါတော့ )
တချို့သော လူတွေဟာ မရိုးသားပေမဲ့ သူတပါးရဲ့ အကျိုး ပျက်လိုရာပျက်စီးကြောင်း
မကြံစည်ဘူးကြဘူး ..မိမိ စားဝတ်နေရေး နေရေးထိုင်ရေး ဘဝရပ်တည်ရေး အကြောင်းအမျိုးကြောင့်
လိမ်မိညာမိကြတာတွေလည်း ရှိပါတယ်.. မကောင်းတာကို လုပ်မိကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်..
ဒါပေမဲ့ သူတပါးကိုထိခိုက်သွားအောင် မလုပ်မိအောင် ကြိုးစားတယ်... ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုတာကို
ထိန်းသိမ်းတယ်.. မိမိရဲ့ အလုပ်ထဲမှာ စကားပြောရင်းနဲ့ လိမ်ပြောမိတာ မရှိပါဘူးလို့ ကိုယ်ကိုကိုယ်
အာမခံနိုင်တဲ့သူရှိပါသလား..ကျမတော့ရှိမယ်လို့မထင်ပါဘူး...ကျမကိုယ်တိုင်လည်း သဌေးနဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ စူပါဗိုက်ဆာနဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ အခြေအနေအရ အနေအထားအမျိုးမျိုးအရ
တခါတရံမှာ မုသားသုံးလိုက်တာတွေရှိပါတယ်... ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ ခပ်တည်တည် နဲ့ လိမ်လိုက်
တချို့တွေကျတော့ ဦးတည်ချက်ပါတဲ့ စကားလုံးတွေ ရည်ရွယ်ချက်တွေပါနေတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့
တိုက်ခိုက်တတ်တယ်လေ... ကိုယ်ကသူတပါးကိုချောက်တွန်းလိုက်တာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ..မသိမသာလေး
ပုတ်ခတ်လိုက်တာဘဲဖြစ်ဖြစ် ခပ်ပါးပါးလေး ထည့်လိုက်တတ်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပါ... ။။
တချို့တွေကျတော့လည်း ဗလောင်းဗလဲ ကိုလုပ်လိုက်ရမှ စိတ်ချမ်းသာတဲ့သူတွေလည်း အများကြီးပါ ..။
နည်းမျိုးစုံနဲ့လူလိမ်အလုပ် လိမ်လည်ပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနေကြသူတွေလည်း
တချို့ဆို ပါးစပ်လေးကသာ ချိုချိုလေးနဲ့ အပြောလေးသာချိုတာပါ... လက်တွေ့မှာတော့
ပါးစပ်ကပြောထားတာနဲ့တခြားစီ ဖြစ်လောက်အောင်ကို လုပ်နေတဲ့သူတွေလည်း အများကြီးပါ ..။
ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဘဲဖြစ်ပါစေ ....ကိုယ်လုပ်နေတာတွေကို သူတပါး မသိဘူးဆိုရင်တောင်မှ
ကိုယ့်တိုင်တော့ သိနေတာပါဘဲလေ ...။
ကိုယ်ဘယ်လို ရည်ရွယ်ချက်မျိုးထားပြီး ဒီစကားကို ပြောလိုက်သလည်းဆိုတာ
ဘယ်သူမှမသိနိုင်ပေမဲ့ ကိုယ်တိုင်ကတော့ သိနေပါတယ်...။
အရှင်းဆုံးပြောရရင်တော့ သူတပါးကို လိမ်လို့ညာလို့ရပါတယ်..
ကိုယ့်ကိုကိုယ်တော့ လိမ်ညာလို့ မရပါဘူး...
အဲဒါဟာ အမှန်တရားတခုပါဘဲ..သူတပါးကို မသိစေချင်တဲ့ အကြောင်းအရာ မှန်သမျှကို
ဖုံးကွယ်ထားလို့ရပါတယ်...ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ဘာတွေ ဖုံးကွယ်ထားလည်းဆိုတာ ကိုယ်တိုင်တော့သိနေမှာဘဲလေ ....။။
“A CLEAR CONSCIENCE IS THE SOFTEST PILLOW ”
“လိပ်ပြာသန့်ခြင်းသည် အနူးညံ့ဆုံးသောခေါင်းအုံးဖြစ်သည်.. ”
ကျန်းမာရေးကြောင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စတွေကြောင့် အိပ်လို့မရတဲ့သူတွေကတော့ ခြွင်းချက်ပေါ့နော် ...
(ဒါပေမဲ့ တချို့သော လူတွေကလည်း ခပ်တည်တည်နဲ့ဘဲ အိပ်ပျော်အောင်
အိပ်နိုင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်လေ.. ...။။ )
ကျမတော့ နူးညံတဲ့ခေါင်းအုံးလေးနဲ့ဘဲ အမြဲတမ်းအိပ်စက်ခွင့်ရချင်တယ်.. ...။။
Posted by blackroze at Friday, October 05, 2012 10 comments
( လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လလောက်ကရေးခဲ့တဲ့ကဗျာလေးဆိုပါတော့ )
Pm 9:26 5.10.2012
Posted by blackroze at Monday, June 18, 2012 17 comments
Posted by blackroze at Monday, June 04, 2012 15 comments